Radio Don Bosco - Masina Maria Renin'Andriamanitra
Masina Maria Renin'Andriamanitra
Arahabaina isika mianakavy nahatratra izao taona vaovao izao. Enga anie ity taona ity hitondra hafaliana sy fiadanam-po ary indrindra mba hampanjakantsika mianakavy ny rariny sy histiny eo amin'ny fiaraha-monina. Fa ankalazaina amin'izao fiandohan'ny taona izao i Masina Maria Renin'Andriamanitra. Arahabaina manokana ireo arovan'izany Renin'Andriamanitra izany.
Herinandro ao aorian'ny nahaterahan'ny Mpamonjy no hankalazana ny fetin'i Masina Maria Renin'Andriamanitra, io ilay antsoina amin'ny teny latina hoe: "In octava nativis Domini" na havaloana aorian'ny nahaterahan'ny Tompo. Ny Konsily tao Éphèse tamin'ny taona 431 no nilaza ny fampianaram-pinoana momba ny "théotokos" (Θεοτόκος), izany hoe i "Maria niteraka an'Andriamanitra" satria tena Zanak'Andriamanitra no naterany, olona faharoa ao amin'ny Trinite Masina izay tonga nofo tao an-kibony sarobidy nanomboka tamin'ny fotoana nilazan'ny Anjely fa hiteraka zazalahy izy.
Ny 01 janoary ihany koa dia natokan'ny Fiangonana hankalazana ny andron'ny Fiadanana. Isan-taona ny Papa Ray masina dia mamoaka hafatra hanentanana ny Fiangonana maneran-tany mba handray anjara ny isam-batan'olona amin'ny fampanjariana izany Fiadanana izany. Ka tsy misy hanavahana fa samy tompon'andraikitra ny tsirairay eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny asa sahanina, eo amin'ny fiaraha-monina misy azy hampanjary an'izany Fiadanana izany. Satria i Kristy, Ilay nirahan'Andriamanitra tety an-tany mba hitondra Fiadanana ho antsika olombelona.